Umthengisi we-SE unodoli osemthethweni wase-USA kunye neYurophu eyinyani ye-TPE yeSilicone ngesondo
Rosine 160CM/5ft2 C-Cup SE Intloko ethambileyo Naughty kuphela yendalo Ukukhanya Tan Silicone Sex unodoli
URosine Udlala160CM/5ft2 Gentle C-Cup SE Unodoli weSilicone onentloko enzima
U-Emmy Lorraine wendalo Oonodoli beSini abaNxibe ngexabiso eliphantsi
UJolene Azalea Oonodoli beSini obugolide bayathengiswa TPE B-Cup Amehlo anyibilikile 166cm/5ft SE Imilebe ebomvu edangazelayo
Juliette 158CM/5ft2 E-Cup SE Enomtsalane TPE Sex Doll
Lexi 161CM Head 105 F-Cup light tan SE Ilokhwe epinki yeDoll TPE Oonodoli bezesondo abaphantsi
Aitana 161CM ibhulukhwe eluhlaza F-Cup iinwele ezinde ezimdaka ngebala SE Unodoli okhanyayo TPE Oonodoli bezesondo bayathengiswa
Celina Quiet 160CM/5ft2 C-Cup SE Virtuous Silicone Sex unodoli
Risako Long Eyelashes160CM/5ft2 C-Cup SE Iimpundu ezimnandi zeSilicone Sex Doll
Catherine Lovely 160CM/5ft2 C-Cup SE Ngokubanzi ulusu Silicone Sex Doll
Pearl 160CM/5ft2 C-Cup SE Pungent kuphela yendalo Virtuous Light Tan Silicone Sex unodoli
UMariko Gentle 160CM/5ft2 C-Cup SE Uthathela ingqalelo ehloniphekileyo kuphela kwendalo, unodoli weSilicone oKhanyayo weSilicone
I-Suzumi Witty 160CM/5ft2 C-Cup SE Amabele amahle endalo kuphela, unodoli weSilicone oKhanyayo we-Silicone
Bailey Real isimbo Asian 151CM E-Cup SE Ithathela ingqalelo TPE Sex unodoli
Lyydia 160CM/5ft2 C-Cup Ithathela ingqalelo SE Head Long Eyelashes Silicone Sex Doll
UChloe Bold 160CM/5ft2 C-Cup SE Udlala ngokwendalo kuphela, unodoli weSilicone oKhanyayo weSilicone
Reese Thin Waist 151CM/4ft9 E-Cup Amabele amahle SE iimpundu ezimnandi zeTPE unodoli wesondo
Uthando oluyinyani lweDoll SE Oonodoli abasemthethweni kumthengisi
Oonodoli be-SE zithengwa kwiwebhusayithi ye-urdolls. Yenzelwe ngokweenkcukacha zakho, gcina umtsha kunye ne-spare unodoli wesondo iintloko, ngoku ziyafumaneka. I-SE Doll yimveliso yoonodoli bezesondo ye-TPE ekumgangatho ophezulu, esebenza ngokukhethekileyo kwimveliso yoonodoli ababhinqileyo kunye neerobhothi zesini eziphathwayo. Zenziwa ngokuhambelana nemigangatho ephezulu yeJinsan kwaye iyahambelana nayo yonke imifuziselo yeJinsan.
Unodoli we-SE ogqwesileyo wokwenyani uyathengiswa
SE.Doll yenye yeebrendi zoonodoli abadumileyo abaphilayo kwaye ngowona mthombo wakho ukhuselekileyo wokuthenga jonga oonodoli bezesondo. The oonodoli benyani inkqubo yokuvelisa iqala ukusuka kwizinto ezikrwada kwaye iyaqhubeka ukuya kwinxalenye yemveliso: uyilo, ukubumba, ukukrola kunye nonyango lomphezulu, emva koko indibano. Oonodoli bothando be-SE baphantsi kolawulo olungqongqo lomgangatho, kwaye oonodoli bezesondo abakumgangatho ophezulu abaphuhliselwe ubomi obandisiweyo benkonzo kunye nokuqina yinkonzo yenkonzo yabavelisi be-SE.
Oonodoli be-SE-Abona badumileyo beempawu zoonodoli ngesondo ngo-2022
Njengomnye wenkulumbuso kunye neempawu ezivelayo kwintsimi yoonodoli bothando, i-SE DOLL ibonelela ngamaxabiso akhuphisanayo. thengisa unodoli wesini i-hypoallergenic kwaye ihambelana nokusingqongileyo. Unodoli unamathambo esinyithi anokufumaneka ngokupheleleyo, enika unodoli amandla kunye nokuguquguquka. I-urdolls ngumthengisi osemthethweni ogunyazisiweyo ngu-SE Doll. I-Urdolls ayithengisi inkohliso se doll sex dolls.
Material: TPE Sex Doll , Silicone Uhlobo: Oonodoli bezesondo ze-Elf, oonodoli besondo be-blonde, oonodoli bezocansi besitayela saseYurophu kunye neMelika, iidoli zesondo ezibomvu zeenwele, iidoli zesondo ezinkulu zebele, iidoli zesondo ze-cowgirl, i-curly hair dolls, njalo njalo.
Intshayelelo: Umenzi woonodoli be-SE uyilwe kwaye uveliswa liqela leenkosi ezinamazinga abalaseleyo emveliso kwindawo yoonodoli besini. Banobuchule obugqibeleleyo ekuveliseni oonodoli ababhinqileyo kunye neerobhothi zesini esiphathwayo, njenge-urdolls.com.
Izinto ezilungileyo ze-SE DOLL:
I-1.SE igxininise kwi-dolls ephakathi ukuya kwi-high-end kwisitayela saseYurophu naseMelika, kunye ne-makeup egqwesileyo kunye nemifanekiso;
2. Yenziwe ngu-WM, umgangatho uphezulu, kwaye imifanekiso yokwenza i-makeup iphuculwe ngesiseko se-WM;
3. I-SE DOLL ilandela idumela elihle kunye nexabiso eliphezulu elongezelelweyo.